मालपोत कार्यालय बैतडीद्वारा ६१ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन | सुदुरपश्चिम खबर
साउन ३१, बैतडी । मालपोत कार्यालय बैतडीले आर्थिक वर्ष ०७६र ०७७ मा रू.६१ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।
उक्त कार्यालयले पूँजिगत लाभकर, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना, रजिष्ट्रेसन र अन्य विविधबाट रू.६१ लाख २६ हजार २७९ राजस्व संकलन गरेको मालपोत कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी अनिल चन्दले बताए ।
‘कोभिड– १९ नियन्त्रणको लागि गरिएको लकडाउनले गर्दा अपेक्षा अनुसारको राजस्व संकलन भएन नत्र योभन्दा पनि बढि हुने थियो’, उनले भने ।
कार्यालयले सवभन्दा बढि रजिष्ट्रेसन शुल्कवाफत रू.४२ लाख ११ हजार ४४२, पूँजिगतलाभ कर वापत रू.७ लाख ३७ हजार ७६२, सेवाशुल्कबाट रू.२ लाख १९ हजार २२५ र रोक्का बापत रू.६ लाख ६३ हजार ६०० संकलन गरेको छ । यसैगरि दण्डजरिवानाबाट रू.१ लाख ९७ हजार १००, पूर्जाविक्री बापत रू.११ हजार ९५० र विविधवाट रू. ८५ हजार २०० संकलन गरिएको मालपोत कार्यालय बैतडीका लेखापाल भवानी प्रशाद भट्टले वताए ।
अहिले जिल्लाका सबै स्थानिय तह सडक संजालले जोडिएका कारण बैंकिङ सुविधा थप हुँदा जमीनको कारोबारमा वृद्धि भइरहेको छ । जमीन धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिनेको संख्या बढेको छ । यसले गर्दापनि जमीन रोक्का गर्नेको संख्या बढेका कारण पनि राजस्व संकलनमा वर्षेनी बढ्दै गइरहेको मालपोत कार्यालयका प्रमुख दिलाराम भट्टले बताए ।
मालापोत कार्यालयले संकलन गरेको रजिष्ट्रेसन शुल्कको जम्मा रकमको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई र ६० प्रतिशत रकम स्थानिय तहलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । आव ०७६र०७७ मा पनि मालापोत कार्यालय बैतडीले रजिष्ट्रेसन शुल्कको प्रदेश सरकारलाई रू. १६ लाख ८४ हजार ५७६ र जिल्लाका १० ओटै स्थानिय तहलाई रू.२५ लाख २६ हजार ८६५पठाएको छ ।
सरकारले दलित महिला र मुक्त हलियालाई जमिन नामसारी गरेमा २५ प्रतिशत छूट दिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६र ०७७ मा कार्यालयले महिला दलित र मुक्त हलियालाई जमीन नामसारी गर्दा रू.३ लाख १८ हजार ६३९ छूट दिएको छ ।
सरकारले छूट दिएपछि महिलाको नाममा जग्गादर्ता गर्नेको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ ।यसैगरि उक्त कार्यालयले पाँच ओटा विद्यालय, ११ ओटा स्वास्थ्य सस्थाँ र ११ ओटा सरकारी कार्यालयको नि स् शुल्क जमीन नामसारी गरेको छ ।